I-Miskleron: imiyalo esetshenziswayo, intengo, ukubuyekezwa, ukufana kwezidakamizwa > Imithi
I-Miskleron: imiyalo yokusebenzisa kanye nentengo yesidakamizwa se-cholesterol
Izizukulwane zama-statins, inani eliphakathi kumakhemisi
Yimiphi imishanguzo ehlobene nama-statins nokuthi isebenza kangakanani ekunciphiseni i-cholesterol engatholakala etafuleni.
Igama lokuhweba lomuthi, ukusebenza kahle kokwehlisa i-cholesterol
Amagama izidakamizwa kanye okuhlushwa kwento esetshenziswayo
Izindleko ezimaphakathi, hlikihla.
Izinga Lokuqala Lezizukulwane
I-Simvastatin (38%) UVasilip (10, 20, 40 mg) ESlovenia 450
I-Simgal (10, 20 noma 40) Kwa-Israyeli nase-Czech Republic 460
I-Simvakard (10, 20, 40) ECzech Republic 330
USimlo (10, 20, 40) ENdiya 330
I-Simvastatin (10, 20.40) E-Russian Federation, eSerbia 150
I-Pravastatin (38%) I-Lipostat (10, 20) E-Russian Federation, e-Italy, e-USA 170
ILovastatin (25%) I-Holletar (20) ESlovenia 320
I-Cardiostatin (20, 40) E-Russian Federation 330
Izinga Lesibili Lesizukulwane
I-Fluvastatin (29%) I-Leskol Forte (80) ESwitzerland, eSpain 2300
Izitatimende Zesizukulwane Sesithathu
I-Atorvastatin (47%) I-Liptonorm (20) ENdiya, eRussia 350
I-Liprimar (10, 20, 40, 80) EJalimane, e-USA, e-Ireland 950
I-Torvacard (10, 40) ECzech Republic 850
Ama-statins wesizukulwane sesine
I-Rosuvastatin (55%) UCrestor (5, 10, 20, 40) E-Russian Federation, eNgilandi, eJalimane 1370
I-Rosucard (10, 20, 40) ECzech Republic 1400
URosulip (10, 20) EHungary 750
I-Tevastor (5, 10, 20) Kwa-Israyeli 560
I-Pitavastatin (55%) I-Livazo (1, 2, 4 mg) E-Italy 2350
Ama-fibrate - ama-Derivatives we-Fibroic Acid
Ama-Fibrate angomuthi wesibili osebenza ngempumelelo ukusiza ukubhekana ne-cholesterol ephezulu. Ngokuvamile zisetshenziswa ngokuhlanganiswa nama-statins. Kwezinye izimo, anqunywa njengezimali ezizimele.
Indlela yokusebenza yamathebulethi ukuthuthukisa umsebenzi we-lipoproteinplase, ophula izinhlayiya zobukhulu obuphansi futhi obuphansi kakhulu. Ngesikhathi sokwelashwa, i-lipid metabolism isheshiswa, izinga le-cholesterol enenzuzo liyakhuphuka, i-carbohydrate metabolism esibindini ihlala ijwayelekile, futhi ubungozi be-atherosranceotic plaques kanye ne-cardiac pathologies luyancipha.
I-Fibrate cholesterol izidakamizwa ibekezelelwa kahle yiziguli. Imiphumela emibi engemihle ivela ezimweni ezingavamile (cishe i-7%%).
Amakhambi asebenza ngempumelelo yilawa:
Clofibrate. Inomsebenzi obizwa ngokuthi yi-hypolipidemic, ithuthukisa izinqubo ze-metabolic esibindini, inciphisa ukuvela kwegazi kanye ne-thrombosis. Ayinqunyelwe ukuvimbela i-hypercholesterolemia yelifa noma ukutholwa.
Gemfibrozil. Clofibrate esuselwa enobuthi obuncane nemiphumela emibi. Imemezele izakhiwo eziphansi ze-lipid. Yehlisa i-LDL, i-VLDL kanye ne-triglycerides, ikhulisa i-HDL, isheshise ukuqedwa kwamafutha asimahla kwamafutha asesibindi.
Bezafibrat. I-cholesterol ephansi ne-glucose, kunciphisa ingozi ye-thrombosis. Imemezele izakhiwo ze-antiatherosclerotic.
Fenofibrate. Umuthi wanamuhla futhi osebenzayo we-cholesterol ovela eqenjini lama-fibrate. Kubhekwa njengesixazululo sendawo yonke ekulweni nokulimala kwe-lipid metabolism kanye nenqwaba yokuqina kwe-insulin. Ngaphezu kwezindawo ezinciphisa i-lipid, inemiphumela yokulwa nokuvuvukala, i-antioxidant ne-tonic.
Ukukhishwa kwefomu kanye nokugxila kwento eyisisekelo
Amatafula, amaphilisi, 500 mg Izibhebhe ezi-1-2 kabili ngosuku 800
Amaphilisi, 300 mg Amaphilisi ama-2 kabili ngosuku 900
Amaphilisi angu-200 mg Ithebhulethi 1 izikhathi 2-3 ngosuku 900
Fenofibrate I-Lipantil Amakhandlela 200 mg 1 i-capsule 1 isikhathi ngosuku 1000
Amafutha awenqatshelwe ngokuphelele kubantu abaphethwe i-cholelithiasis, i-gallder, isibindi nokungasebenzi kwezinso. Ngokunakekelwa okukhulu, zibekelwe abasebasha nabadala.
Izikhathi zokuhlukaniswa kwama-bile acid
Iqembu lezidakamizwa elehlisa i-lipid elicindezela ukukhiqizwa kwe-cholesterol. Zisetshenziswa njengezithako zokwelapha eziyinkimbinkimbi.
Ama-acid e-Bile akhiwa ngesikhathi sokuphendula komzimba phakathi kwe-cholesterol namafutha. Ama-sequestrant abopha la ma-asidi emathunjini amancane futhi awasuse emzimbeni ngokwemvelo. Ngenxa yalokhu, ukungena kwabo esibindini kuncishiswa kakhulu. Isitho siqala ukuhlanganisa la ma-asidi, sisebenzisa i-LDL eningi, esinciphisa inani laso eliphelele egazini.
Ama -ququuction abopha ama-bile acid ahlukaniswe umhlangano ngamaqembu amathathu:
I-Colestyramine (cholestyramine). Uma ungena emathunjini amancane, akha ama-bile acid complexes angangeneki. Isheshisa ukuphuma kwabo futhi inciphise ukumuncwa kwe-cholesterol yizindonga zamathumbu.
Colestipol. Isisindo esiphezulu se-Copolymer yesisindo. Yehlisa ukufakwa kwe-cholesterol engaphandle. Okungasebenzi kahle kune-colestyramine, ngakho-ke, kuvame ukubekwa ekwelapheni okuyinkimbinkimbi kweziguli ezine-hypercholesterolemia eyinhloko.
Abenzi bamasondo. Amathebulethi avela esizukulwaneni esisha se-cholesterol. Ziyasebenza kakhulu, empeleni azibangeli zimpendulo ezingezinhle. Kuhamba kahle nezinye izidakamizwa. Ingathathwa ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngaphezu kokunciphisa ukugcwala kwe-cholesterol eyingozi, izidakamizwa zinciphisa ingozi yokuthola isifo senhliziyo, i-coronary complication, ukushaya kwenhliziyo. Abangenwa ngokujikeleza kwe-systemic, ngenxa yalokho, babangela ubuncane bemiphumela emibi. Ezimweni eziningi, lokhu kuyinkinga yokuphazamiseka komqondo: ukuthokomala, isifiso sokulimala, isihlalo esicasukile.
Ama-inhibitors we-cholesterol ukumunca
Imithi yalesi sigaba ayikhuphi ukuphuma kwe-bile acid futhi ayikuvimbeli ukukhiqizwa kwe-cholesterol ngesibindi. Isenzo sabo sihlose ukunciphisa ukugeleza kwama-asidi kusuka emathunjini amancane angena esibindini. Ngenxa yalokhu, izinqolobane zento ziyancishiswa, futhi ukuphuma kwayo egazini kuyathuthukiswa.
Izidakamizwa ezisebenza kahle kakhulu kulesi sigaba:
I-Ezetimibe (i-analogues: Ezetrol, Lipobon). Ibhala isigaba esisha. Yehlisa ukufakwa kwe-cholesterol emathunjini amancane. Unganciphisi ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi, ungathinti isikhathi sokuphila sonke esigulini. Isebenza kakhulu lapho ihlanganiswa nama-statins. Imiphumela emibi ingenzeka - komzimba, isifo sohudo, ukonakala kwezakhiwo zegazi.
I-Guarem (gar gum). Inomphumela we-hypocholesterolemic ne-hypoglycemic. Kwehlisa ukufakwa kwe-cholesterol emathunjini amancane, ngenkathi kuthuthukisa izinqubo ze-metabolic esibindini. Ngokwelashwa okuyinkimbinkimbi, kunciphisa izinga le-LDL ne-triglycerides ngo-10-15%.
Izidakamizwa zokwehlisa i-cholesterol yegazi zibekelwe ifomu eliphambili nelifa le-hypercholesterolemia, elinesifo se-lipid metabolism lapho kunesifo sikashukela i-mellitus.
Izidakamizwa ezithuthukisa ukuqina kodonga lwe-vascular
Zisetshenziselwa ukwenza ngcono ikhwalithi kanye nokusebenza kokwelashwa okuyinhloko kanye nokuvinjwa kwezinkinga ze-atherosulinosis. Ukwelashwa okulekelelayo kufaka phakathi izidakamizwa ezithuthukisa izakhiwo zegazi, isimo sezindonga zemithambo yegazi, ukunikezwa kwegazi lokubeletha:
IVinpocetine. Ukhipha i-spasm ye-membrane yemisipha yemithambo yegazi, ithuthukisa ukuhamba kwegazi lokugunda, iguqule izinqubo ze-metabolic kanye nomfutho wegazi. Inomphumela onenzuzo ohlelweni lwezinzwa oluphakathi.
I-Dihydroquercytin. Amaphilisi wokuthuthukisa ukusebenza kwenhliziyo kanye nesimo se-vascular. Ngokwezifiso i-lipid metabolism, yehlisa ushukela, yehlisa ukuhamba kwe-atherossteosis.
Acetylsalicylic acid. Yabela ukuthoba igazi futhi unciphise nengozi yokuqhekeka kwegazi.
Izithako ze-cholesterol. Amandla okuthatha ngokukhuphuka okuzinzile kwe-LDL akungabaza kakhulu. Ngokungafani nezidakamizwa ukwehlisa i-cholesterol yegazi, izengezo zokudla zivivinywa kuphela ukuze ziphephe. Okwamanje abukho ubufakazi bokusebenza kwabo ngokwelashwa. Kepha zingasetshenziswa ngokuphambuka okuncane ezingeni le-LDL kusuka kokujwayelekile kanye nokwelashwa kokudla nokulungiswa kwendlela yokuphila.
Wonke amaphilisi kufanele athathwe kuphela ngokuyalelwa udokotela wakho. Ngaphezu kokuthatha imishanguzo, abantu abane-cholesterol ephezulu kufanele bashintshe indlela yabo yokuphila nokudla. Kulokhu kuphela uma lokhu kwelashwa kuzoba okusebenzayo kakhulu futhi kusebenza kahle.
UGeorge T. Krucik, MD, MBA. Izindlela zokwenziwa kwe-Statins Zokwehlisa i-Cholesterol, 2016
USusan J. Bliss, RPh, MBA. Izidakamizwa ze-Cholesterol-Lowering, 2016
I-Omudhome Ogbru, PharmD. I-Cholesterol Kwehlisa Imithi, 2017
A. A. Smirnov. Ukuqhathaniswa kokuqhathaniswa kokusebenza kwezokwelapha kwama-statin anamuhla
Lokhu okuqukethwe kwalungiswa ngababhali bephrojekthi ngokuya ngenqubomgomo yokuhlelwa yaleyo ndawo.
I-Ro-statin - ukwehlisa i-cholesterol yegazi
Umuthi i-Ro-statin ungoweqembu lama-statins, isb., Izidakamizwa eziklanyelwe ukwehlisa i-cholesterol yegazi futhi zivikele ekuthuthukiseni i-atherossteosis.
Kuyi-atherosclerosis ebangela imivimbo kanye nokuhlaselwa yinhliziyo. Izimo zinikela ngokuvikelwa okuphelele kohlelo lwezinhliziyo, kepha kuzodingeka zithathwe njalo.
Imvamisa, izidakamizwa ezinjalo zibekelwa abantu abane-coronary isifo senhliziyo, abahlushwa i-angina pectoris, i-mellitus yesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme.
Ngaphezu kwalokho, kuboniswa ama-statin ezigulini ezine-cholesterol ephezulu, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, kanye ne-coronary syndrome. Enye yezidakamizwa eziphephe kakhulu nezisebenza ngempumelelo zalolu hlobo ngamathebulethi eRo-statin, angadakwa njengezinyathelo zokuvimbela.
Ukuze ungalimazi impilo, kubalulekile ukuthatha umuthi ngokuqinile njengoba kuchazwe udokotela, ngemuva kokufunda imiyalo yokuyisebenzisa. Umuthi unezimpawu eziningi eziphikisayo futhi ungadala ukusabela okungekuhle.
1. Isenzo se-Pharmacological
Umuthi ungoweqembu lama-HMG-CoA reductase inhibitors (elinye igama lama-statins), elivimbela ukwakheka kwe-cholesterol esigabeni sokuqala.
Umuthi uqala ukusebenza esibindini, ngoba lesi sitho sinesibopho sokuhlanganiswa kwe-cholesterol kanye nokuqhekeka okwalandela kwe-lipoproteins yayo ephansi (LDL). Lapho usebenzisa i-Ro-statin, kukhona ukwehla kokuqukethwe kwe-cholesterol ngaphakathi kwamaseli, okukhuphula umsebenzi wama-LDL receptors futhi kusheshise i-catabolism ye-cholesterol eyingozi.
Umuthi awunawo nomthelela ekwakhekeni nasekuwohlokeni kwamafutha acid yamahhala. Ngaphezu komphumela obizwa ngokuthi yi-hypolipidemic, i-Ro-statin inethonya elihle ezindongeni zemithambo yegazi, ithuthukisa ukwakheka kwegazi, futhi inezindawo eziqinile ze-antioxidant.
Umuthi ubhekana ngokushesha nokudangala kwe-endothelial, okuwuphawu lokuqala lokuthuthuka kwe-atherosclerosis, futhi kunomphumela we-antiproliferative. Imiphumela yokuqala yokwelashwa ingabonakala ngemuva kwesonto lokuphatha, futhi ngemuva kwenyanga, umphumela omkhulu wezidakamizwa uyatholakala.
2. Izinkomba zokusetshenziswa
Imvamisa, i-Ro-statin imiselwe ukwelashwa kanye nokuvinjelwa kwezifo zenhliziyo kanye ne-hypercholesterolemia eyinhloko. Umuthi uyasiza ngisho noma ukudla okhethekile nokuzivocavoca kungasebenzi ekwehliseni i-cholesterol.
Izinkomba eziphambili zokuqokwa:
i-hypercholesterolemia exubekile ne-homozygous,
i-hypertriglyceridemia (izinhlobo ezi-4),
ukuvimbela kwezifo ze-vascular and inhliziyo.
Iqembu elisengozini lokuqanjwa kwama-pathologies anjalo lifaka abantu asebekhulile (kusukela eminyakeni engama-50 ubudala), iziguli ezinesifiso sokuthola ifa kuya ku-ischemia yenhliziyo, umfutho wegazi ophezulu nokubhema.
3. Indlela yokusebenzisa
Amakhompiyutha athathwa ngomlomo, ngaphandle kokuhlafuna, ngamanzi amaningi.
Baphuza lo muthi ngaphandle kokudla, futhi udokotela ubeka umthamo, ubude bokwelashwa kanye nobuningi bokuphatha bebodwa.
Kuya ngezinto eziningana, ngoba i-Ro-statin ayinqunyelwe ukwelashwa kuphela, kodwa futhi nokuvimbela. Umthamo ubuye ukhethwe ebubini besifo, ukusabela ezindleleni zokwelapha.
Iziguli eziqale ukuthatha umuthi noma ezaziphuza ngaphambili izidakamizwa zibekelwa umthamo omncane (5 mg / ngosuku). Ngokuguquguquka okuhle, umthamo ungandiswa, kepha hhayi ngaphambi kwenyanga ngemuva kokuqala kokwelashwa.
Kwi-hypercholesterolemia enkulukazi, inani eliphelele lomuthi lelo lenyuka lifinyelela kuma-40 mg, kepha lokhu kumele kwenziwe ngokuqapha ngokweqile. Ngenxa yengozi ephezulu yemiphumela emibi, kulokhu, ukwelashwa kwenziwa kuphela ngaphansi kokuqokwa udokotela.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa nomuthi, isiguli kufanele silandele indlela yokudla eqinile ye-hypocholesterolemic. Kufanele unamathelwe kuso sonke isikhathi sokwelashwa, uma kungenjalo, ngeke ube khona umphumela kusuka ekusebenziseni umuthi. Awukwazi ukuthatha i-Ro-statin ngaphandle kwemiyalelo kadokotela. Nguye kuphela ongabala umthamo ofanele futhi afinyelele iziphetho ngesidingo sokwelashwa ngalo muthi othize.
4. Ukwakheka, ifomu lokukhulula
I-Ro-statin ikhiqizwa yiRussian LLC Ozone, ngesimo samaphilisi we-gelatin, kumthamo we-5, 10, 20 no-40 mg. Kufakwe emabhulini epulasitiki we-contour, ama-5, 6, 7 noma ama-PC ama-10. Kanye namabhodlela epulasitiki amnyama angama-50 nama-100 ama-PC.
Ukwakheka kwekhompiyutha ngayinye, njengesithako esisebenzayo, kufaka ne-rosuvastatin calcium. Izinto ezingeziwe yi-lactose, i-colloidal silicon dioxide, i-magnesium stearate, i-cellulose, i-povidone ne-croscarmellose sodium.
Zonke lezi zingxenye zitholakala emaphaketheni ngesimo sengxube yemiganu kanye ne-powder enombala omhlophe noma omncane ophuzi.
5. Ukuxhumana neminye imithi
Lapho ulapha neRo-statin, kubalulekile ukubheka ukuthi iyakwazi ukubopha ngokushesha izinhlobo ezithile zamaprotheni ezokuthutha. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwabo okuhlangene kungaholela ekuthuthukisweni kwe-myopathy.
Akunakusho ukuthi kufanele i-Ro-statin inqunywe kanye ne-Cyclosporine, ngenxa yokwanda okuphindwe kasikhombisa kwenani eliphelele lama-statin kwiplasma yegazi.
Umphumela ofanayo uzotholakala ngenkathi uphuza umuthi ngama-inhibitors we-HIV.
6. Imiphumela emibi
Ngaphambi kokusebenzisa umuthi, kubalulekile ukutadisha ngokucophelela imiphumela yako emibi engemihle. Imiyalo ichaza eziningi zazo, kepha zibonakala kakhulu futhi zidlula ngokuzimele ngemuva kokuyeka ukwelashwa.
Imiphumela engaba khona yokuthatha yilena:
isifo sikashukela mellitus (izinhlobo ezi-2),
Lokhu kusho ukuthi imvamisa yezehlakalo ezinje yaqoshwa ku-1% yeziguli ezphuza umuthi, kepha ngokuyisisekelo, ibekezelelwa kahle.
I-overdose ayibeki ingozi enkulu emzimbeni, futhi asikho isidakamizwa esikhethekile samacala anjalo. Ngisho nokuthatha imithamo eminingana yesidakamizwa ngesikhathi esisodwa akukuthinti ama-pharmacokinetics ayo.
Uma kuvela izimpawu ezingezinhle, kufanele ubonane nodokotela ozokunikeza ukwelashwa okubonakalayo.
Njenganoma yimuphi umuthi, i-Ro-statin ine-contraindication ethile okufanele uyisebenzise, ​​kodwa imbalwa yayo. Ngokuyisisekelo, konke ukwephulwa kuncike kumthamo wento esebenzayo.
Komuthi, ku-umthamo we-10-20 mg, abalulekile yilezi:
iminyaka yezingane (kuze kube iminyaka eyi-18),
ukulimala kwesibindi okukhulu,
ukuphathwa ngokubambisana kwe-cyclosporin,
ukungabekezeleli i-galactose noma i-lactose,
ukuzwela komuntu ngamunye kwezakhi zokwakha.
Contraindication kumthamo wama-40 mg:
zonke izifo ezingenhla,
isifo sokuqina kwemisipha.
Ngaphezu kwalokho, i-Ro-statin ayisetshenziselwa ukwelapha iziguli zomjaho wase-Asia.
Ukuqapha ngokweqile kwe-statin kwenziwa ezimweni ezilandelayo:
ebudaleni (kusuka eminyakeni engama-65),
i-endocrine engathi sína ne-renal pathologies,
Ngaphansi kokuqondiswa udokotela, ukwelashwa nomuthi kuyenziwa uma kunobungozi be-rhabdomyolysis kanye nokwanda okuqhubekayo kwezinga lama-statins egazini.
8. Imigomo nemibandela yesitoreji
Ama-caps-Roin statin agcinwe endaweni eyomile, kude nezingane, at hhayi aphakeme kuno + 25C.
Impilo yeshalofu yesidakamizwa yiminyaka emi-2.
Izindleko zomuthi ngokuqondile azixhomeki kwinani lamaphilisi kuphela kwiphakeji, kodwa futhi nasekhemisi lapho zithengiswa khona. Intengo yokugcina yezitolo ithonywa yizinto eziningi, kufaka phakathi izindleko zokuhamba nezokuhamba. Intengo futhi iyashintsha isuka esifundeni lapho kuthengiswa khona lo muthi.
Izindleko ezimaphakathi eRussia: Amaphilisi we-5 mg, azobiza ama-ruble ayi-514-525, no-10 mg - kusuka kuma-ruble ayi-640. Isidakamizwa esilinganiselwe ku-20 mg singathengwa ama-ruble ayi-770-820 ngephakethe ngalinye bese kuthi ama-40 mg abize cishe ama-ruble ayi-1100-1200.
Umuthi Ro-statin ayisetshenziswanga e-Ukraine, kanye ne-analogue yayo ephelele ekwakhiweni nakwinto esebenzayo (Rosuvastatin) ingathengwa ngama-65-250 h scrollnias.
Kunamaqembu amabili ezidakamizwa ezifanayo.
Owokuqala ufaka zonke izidakamizwa ngokusekelwe ku-rosuvastatin:
Iqembu lesibili lifaka izidakamizwa ezinento ehlukile esebenzayo, kepha zinezinkomba ezifanayo zokuzisebenzisa.
Ucwaningo oluningi selukhombisile ukuthi yidakamizwa esekwe ku-rosuvastatin esebenza ngempumelelo kakhulu ekubhekeni i-cholesterol ephakeme futhi ibe nomphumela omuhle wokunciphisa i-lipid.
Imvamisa, iziguli zisabela kahle kulo muthi, ziphawula ukusebenza kwawo okuphezulu nokubekezelela okuhle. Kwesinye isikhathi futhi akukho zinhloso, izibuyekezo ezingezinhle.
Lokhu kuchazwa yiqiniso lokuthi umuthi awunawo umphumela ophawulayo, obonakalayo emzimbeni. Ukwehla kwe-cholesterol kungabonakala kuphela ngemiphumela yokuhlolwa, kepha lokhu akuyithinti impilo. Iziguli eziningi eziphuza umuthi zishiya ukubuyekezwa okuhle ngakho.
U-Anna: Muva nje, udokotela ungibekele i-Ro-statin, kumthamo we-5 mg. Ngiphuze isifundo izinyanga ezimbili, ngiphikisana nesizinda sokudla okuqinile, futhi ukuhlaziya kwabonisa ukuthi amazinga we-cholesterol ancipha kakhulu. Azange ngibe nemiphumela emibi, kepha ngiyithathe ngampela ekuseni, ngayi-1 enye nenye.
Ngiyacela, uma umuntu esebenzisa lesi sidakamizwa, shiya impendulo yakho ngakho, ngoba kuzosiza kakhulu abanye abavakashi besayithi.
I-Ro-statin iyisidakamizwa sesizukulwane sakamuva, esisebenza kangcono kunezinye izidakamizwa zalolu hlobo.
Linciphisa ngokushesha izinga le-cholesterol eyingozi egazini futhi livikele umzimba ekuthuthukisweni kwe-pathologies ye-inhliziyo.
Inokuphikisana okumbalwa nokuphendula okuphambene.
I-Ro-statin ayikwazi ukusetshenziswa ngaphandle kokuyalelwa ngudokotela, ngaphandle kwalokho imiphumela emibi ayinakugwenywa.
Ngabe le ndatshana ibilusizo? Mhlawumbe lolu lwazi luzosiza abangane bakho! Sicela uchofoze kwesinye sezinkinobho:
I-Aterol - ukunciphisa i-cholesterol ephumelelayo
I-cholesterol ephezulu ihlala iholela emiphumeleni emibi.
Le nkinga ingenzeka kubantu abahlukahlukene, kungakhathalekile ubulili babo nobudala, futhi kuvame ukwenzeka kubantu abakhuluphele.
Lokhu akumangazi, ngoba ukugcwala kwale nto emzimbeni kubangela ukuqokelelwa kwamaseli wamafutha, kuholele ekuqhekekeni kwemithambo yegazi, futhi kuthinte kabi ukusebenza kwazo zonke izitho nezinhlelo, okugcina kuholele ekuhlulekeni kwazo.
Kungakho ukuba khona kwe-cholesterol ephezulu kuyinkinga ebalulekile, kuba nesixazululo sakho lapho udinga ukukhetha ikhambi eliphumelela ngempela. Namuhla, isisindo esikhulu sezidakamizwa ezethulwe umuthi oyingqayizivele i-Aterol. Kuzothuthukisa isimo somuntu ngesikhathi esifushane, futhi ibuyise i-cholesterol ejwayelekile.
Ukwelashwa kwe-cholesterol eyeqisayo kufanele kube okubanzi ukuze kuqedwe imbangela yokuqongelela kwayo, futhi ungabhekani nezimpawu ezingezinhle kuphela.
Izidakamizwa ezazikade zithathwa njengezinempumelelo kakhulu ekuxazululeni le nkinga, kaningi azange zisindise ngokuphelele kuyo yonke imiphumela emibi yokulimala kwe-metabolism, futhi kwesinye isikhathi zize zengeze nemiphumela yazo emibi, ngaleyo ndlela zikhulisa isimo esivele sibi sesiguli.
Inkambo yokwelapha ngamathebhulethi ajwayelekile yayigcwele izinsongo eziningi, njengokuthuthuka kwe-pathologies ehlukahlukene yesibindi nezinso, ukulimaza izicubu zomzimba, kanye nengozi yokuzala inzalo.
Kodwa-ke, ngonyaka we-2014 kwaba nokuqhekeka okungakaze kube khona okuhambisana nokuqala kokuhlolwa kwesininzi kwentuthuko yakamuva - umuthi i-Aterol, obekufanele uguqule ukwelashwa kwe-cholesterol ephezulu, kanye nokukhuluphala ngokweqile. Futhi kwenzeka. Abantu abangama-300 babamba iqhaza ekuhlolweni kwayo.
Bahlukaniswe baba ngamaqembu amabili, kwesinye isiguli sathatha umuthi i-Aterol ngokwezinsuku eziyi-14, kanti kwesinye, izidakamizwa ezijwayelekile ezazisebenza ngama-statin.
Imiphumela yokuhlolwa ikhombisile ukuthi kwezinye izifundo ezivela eqenjini lesibili, okuqukethwe yi-cholesterol kwehle kancane, kepha iningi labo alitholanga umphumela oyifunayo, ngenkathi iziguli ezivela eqenjini lokuqala cishe zazilingana ngokuphelele nemingcele yale nto.
Cishe i-90% yabantu abathatha ikhambi bakwazile ukufeza ukuxolelwa okuqinile kwesifo inyanga eyodwa ngemuva kokuqala kokwelashwa, abanye bazizwa bengcono kakhulu esimweni sabo esejwayelekile futhi basondeza izinga labo le-cholesterol ezingeni eliphakeme lejwayelekile.
Lezi zifundo zenze ukuchitheka kwezokwelapha, ngoba ukusebenza kwe-Aterol nakho kwaqinisekiswa ngumthelela omuhle ekubekelweni kwamafutha emzimbeni.
Kubiza malini nokuthi ungayithenga kuphi i-Aterol?
I-Aterol ayitholakali ekhemisi elijwayelekile, ungayithenga kuphela kwi-Intanethi. Kungcono ukusebenzisa izinsiza zewebhusayithi esemthethweni lapho unga-oda ukulethwa kunoma yisiphi isifunda sezwe.
Ukuze wenze lokhu, faka imininingwane yakho kwifomu elifanele, bese ulinda ucingo oluvela komunye wabaqhubi bokusebenza abazocacisa imininingwane ye-oda ngocingo.
Inkokhelo yokuthenga yenziwa ngemali lapho kuhanjiswa, okungukuthi, kuphela ngemuva kokutholwa ngeposi noma ukulethwa kwepasela ngothunyelwe.
Izindleko zezimali ezethulwe ama-ruble angama-1980, noma kunjalo, kuwebhusayithi yomkhiqizi kunethuba lokuyithenga ngentengo engcono, ngenxa yokunikezwa okunqunyelwe ngesaphulelo esingu-50%. Kulokhu, izindleko ze-Aterol zizoba ama-ruble angama-990.
Ngaphezu kwalokho, ngokuthenga imikhiqizo emthonjeni osemthethweni, umthengi uthola isiqinisekiso esiphelele sekhwalithi nokuvikelwa ezifeni, ezisatshalaliswa kabanzi ngabakwa-scammer muva nje.
Kuhle ukukhumbula ukuthi ukusetshenziswa kwemikhiqizo engaqinisekisiwe kungadala imiphumela emibi eminingi ngendlela yemiphumela emibi, kanye nokwanda kwalesi sifo, okuzoholela ekwandeni kwe-cholesterol engalawulwa.
Lesi sidakamizwa sinomphumela oyinkimbinkimbi, sidambise imbangela ye-cholesterol ephezulu. Umphumela wayo udlulela ezithweni eziningi nasezinhlelweni eziningi, okuholela ekushintsheni okuhle komzimba. Phakathi kwazo kukhona:
Ukwenza kube lula i-cholesterol, okuholela enanini elamukelekayo le-lipoprotein ephezulu nephansi,
ukuncishiswa okukhulu kwengozi yezifo zenhliziyo ezahlukahlukene, njengokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi,
ukuhlanza umzimba wezinto ezinobungozi - ubuthi nobuthi, okunomthelela ekuqhekekeni kwemithambo yegazi kanye nobuthi emzimbeni ngokuhamba kancane,
ukuqinisa ukungatheleleki, okunomthelela ekuphikiseni umkhuhlane,
ukwenza kusebenze kwenkambo evamile yezinqubo ze-metabolic, kanye nokwenza ngcono umsebenzi wokugaya wegaya wokugaya ukudla,
Ukususwa okuphephile kwamafutha ahlanganisiwe emzimbeni, okufaka isandla ekunciphiseni isisindo,
ukukhuphuka okukhulu kokusebenza kahle nokuqina kwamandla okuqina,
ukwenza ngcono isimo esijwayelekile esingokomzwelo esingakuvumeli ukuthi uwe ekucindezelekeni, kanye nokwenza kube lula ukulala.
Izakhi zomuthi i-Aterol ziyizinto zemvelo kuphela, isenzo sazo okuhloswe ngaso ukululama ngempumelelo ngaphandle kwemiphumela emibi. Ukwakheka kufaka i-bifidobacteria ne-lactobacilli. I-Bifidobacteria yenza imisebenzi ewusizo emzimbeni womuntu njenge:
Ukuvikelwa kwamathumbu ekungeneni kwamagciwane ayingozi, kanye nobuthi obulala amaseli wezitho zangaphakathi futhi anoshevu emzimbeni,
ukukhiqizwa kwamafutha e-organic, asiza ekwenzeni i-cholesterol ibe ngokwejwayelekile,
ukusetshenziswa kwezingxenye zokudla, okuthinta umsebenzi wokumba womzimba womuntu ngokufanele.
Futhi, i-lactobacilli ibangela lezi zinguquko ezilandelayo ezinhle:
ukuvimbela ukuphazamiseka kwamathumbu e-intestinal microflora, kanye nokubuyiselwa kwayo ngemuva kwezifo ezahlukahlukene,
ukulungiswa kwenqubo ye-metabolic, evimbela ukwakheka nokuthuthukiswa kwama-pathologies ezinhlobo ezahlukahlukene.
Kuyafaneleka futhi ukusho ukuba khona kwezitshalo ezikhipha i-articoke ze-Jerusalem, i-fibregam ne-acacia kulokhu kulungiselela. Ngayinye yalezi zithako idlala indima ebalulekile ekwelashweni.
I-Jerusalem artichoke inenqwaba yama-carbohydrate, kanye nama-organic kanye namafutha acid, esiza ekuqothuleni amaseli aqukethe amanoni esibindini, anelisa umzimba ngamavithamini namaminerali, futhi athuthukise nokugaya.
I-Fibregam, encibilika ekholoni, yakha inqwaba ethile emboza futhi ivikele ulwelwesi lwe-mucous emiphumeleni eyingozi yezifo ezahlukahlukene, futhi ilawula nezinga lekholesterol.
I-acacia futhi inciphisa ubungozi bokuqhekeka kwegazi kanye nezinkinga zalo ezihambisana nalo.
Uma kuqhathaniswa nemithi yesenzo esifanayo, amaphilisi ethuliwe anezinzuzo eziningi ezingenakutholakala, ngenxa yazo eseyindlela engcono kakhulu yokulwa ne-cholesterol ephezulu. Izinzuzo eziphambili ze-Aterol yilezi:
ukusebenza kahle okuphezulu, okuqinisekisiwe phakathi kwezifundo ezinde neziningi, izincomo zochwepheshe abaholayo, kanye nezitifiketi zekhwalithi,
ukuphepha okuphelele komzimba, ngenxa yokungabi bikho kokuphikiswa nemiphumela emibi, ekuvumela ukuthi uqede inkambo yokwelashwa ngaphandle kwemiphumela emibi nokulimaza impilo,
ukuba khona kwengxenye yemvelo ekhethekile ekwakhiweni okungamunzwa kalula ngumzimba ngesikhathi esifushane,
umphumela oyinkimbinkimbi, hhayi nje ngokujwayelekile ukwenza isilinganiso se-cholesterol, kodwa futhi ubuyisele inqubo yezinqubo ze-metabolic, ezisiza ukunciphisa umzimba,
izindleko eziphansi zokukhiqiza, kanye nokukhululeka kokulethwa esifundeni osifunayo.
Umuthi uyatholakala ngesimo samaphilisi we-0.25 g.Amaphakeji ezincezu ezingama-50 nezingama-250 ayatholakala ukuze athengiswe, ukhetho lwenziwa ngokuya ngesikhathi senkambo yokwelashwa. Intengo yesidakamizwa ngama-ruble angama-900.
Gcina umuthi endaweni epholile, kude nelanga eliqondile. Impilo yeshelf ayikho ngaphezu kweminyaka emihlanu. Baphuza imithi kuphela njengoba kushiwo ngudokotela, ngaphambi kwalapho udinga ukufunda imiyalo yokuyisebenzisa, ukuzelapha yona akuvunyelwe.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngamaphilisi, kuyadingeka ukulandela ukudla okwelaphayo isikhathi eside nokudla okulinganiselwe kwamafutha nokudla okumnandi, futhi futhi njalo kuveze umzimba ekusebenzeni komzimba. Kulesi simo kuphela, umuthi unomphumela wokwelapha emzimbeni.
Uma isiguli sivele silandela ukudla noma sidla usawoti wethebula, ushukela noma okunye ukudla ngesilinganiso esilinganiselwe, kubalulekile ukwazisa udokotela ngalokhu.
Njengoba i-cholesterol iyinto ebalulekile futhi ibandakanyeka ekwakhekeni kwamangqamuzana, iMiskkleron ayinconyelwe ukusetshenziselwa ekwelapheni izingane ezingaphansi kweminyaka emibili. Yize kungqubuzana ngqo nobuntwana, umuthi awunawo.
Amathebhulethi athathwa nsuku zonke ngasikhathi sinye, lokhu kuzokuvumela ukuthi uqaphele imvamisa yokwelashwa.
Ekuqaleni, isiguli singase siphatheke kabi, siphuze umuthi ngemuva kokudla noma ngokudla.
Umthamo ukhethwa ngamunye, ugxile eminyakeni yobudala, isimo sesiguli kanye nokuba khona kwezifo ezincane. Ukususa ngempumelelo i-cholesterol ephezulu, amaphilisi athathwa ngokuya ngohlelo olulandelayo:
Abantu abadala bakhonjiswa idosi lamaphilisi amane ngosuku, umuthi uthathwa kathathu ngosuku ngesikhathi sokudla.
Umthamo wezingane unqunywa ngawodwana, ngemuva kokwenza ukuhlolwa futhi uphase izivivinyo ezidingekayo.
Ngesikhathi sokulashwa, awukwazi ukuyeka ukuyithatha ngaphandle kwemiyalo kadokotela, ngoba lokhu kungadala ushintsho oluphindaphindekile ku-cholesterol egazini likashukela.
Akunconyelwe ukwengeza noma yiziphi izidakamizwa, ngoba lokhu kunciphisa umphumela wokwelapha.
Intengo Miskleron (Miscleron) kumakhemisi aseSt
I-Atherossteosis nezinye izifo ezihambisana ne-hypercholesterolemia (impaired lipid metabolism).
Ngaphakathi, ngemuva kokudla, thatha amaphilisi ama-2-3 izikhathi ezintathu ngosuku.
Izimpawu ze-dyspeptic, ukuqubuka kwesikhumba nokulunywa.
Ukungasebenzi kwesibindi nezinso, ukukhulelwa.
Ingahambisani ne-antidiabetesic sulfonylureas (ingozi ye-hypoglycemia), ithuthukisa umphumela wama-anticoagulants.
Iphakethe ngalinye le-Aterol liqukethe imiyalo elula echaza imigomo eyisisekelo yokusetshenziswa kwayo. Kunconywe kakhulu ukuthi unamathele ohlelweni olulandelayo ukuze inqubo yokuphola isebenze ngempumelelo ngangokunokwenzeka.
Leli khompiyutha kufanele lithathwe ngaphambi kokudla kwama-1-2 ama-pcs., Lihlanzwe ngamanzi amancane. Kubantu abaningi, izimpawu ezingezinhle ziyanyamalala ngokushesha ngemuva kwemithi yokuqala, futhi ekugcineni kwenkambo ephelele yokwelashwa, kuvela okuzinzile.
Ukusetshenziswa kwe-Aterol kufanele kwenzeke kungakapheli amasonto amathathu ukuzinzisa i-cholesterol nezinye izinsuku eziyisikhombisa ukuhlanganisa umphumela omuhle, okuthi konke kunikeze cishe inyanga yokwelashwa.
Ngalesi sikhathi, zonke izinqubo ze-metabolic emzimbeni zisetshenziswe ngokuphelele, futhi ukwehla kancane kancane kwenani lamaseli wamafutha kuyaqala.
Umuthi owethulwe unomphumela owenzeka isikhathi eside. Lokhu kusho ukuthi umphumela wayo uzokwenziwa ngisho nangemva kokuphothulwa kwenkambo yokwelapha, ulethe amazinga we-cholesterol emazingeni ajwayelekile.
I-Aterol iphephile ngokuphelele futhi ayinazo izingqinamba zokusetshenziswa. Ngenxa yokuba khona kwezakhi zemvelo ezikhethekile, ifeza umphumela ophelele empilweni yabantu, yenza umsebenzi wezinhlelo eziningi zomzimba ziwenze ube munye. Ngokungafani nemithi eminingi enomphumela ofanayo, lesi sidakamizwa siqhosha sithi:
akubangeli imiphumela emibi evela ekusebenzeni okuhambisana nokuvela kwekhanda, isicanucanu, ukuthopha kanye nokunye ukuphazamiseka,
akuholeli ezifweni zezinso nesibindi, ngenxa yokungabikho kwamakhemikhali ayingozi ekwakhekeni okubhubhisa amaseli wezitho zangaphakathi,
akubangeli ukuhoxa kwesifo, okubonakaliswa ngendlela yokwanda ngokushesha kwenani le-cholesterol ngemuva kokuphela kwenkambo yokwelashwa,
Amakhompiyutha ethuliwe asatshalaliswa ngaphandle kadokotela, ngoba athobela ngokuphelele wonke amazinga wekhwalithi futhi awaholeli emiphumeleni emibi ngesikhathi nangemva kokwelashwa.
U-Arkady Ivanovich, udokotela ojwayelekile, Khabarovsk, Russia.
“Isidakamizwa sanamuhla i-Aterol yisidakamizwa sakamuva esilwa ne-hypercholesterolemia, ngenxa yokuthi abantu abaningi bahlushwa ukukhuluphala, kanye nezifo zenhliziyo ezahlukahlukene. "Lo muthi ungaholela ekululameni okuphelele esikhathini esifushane, ngaphandle kokubanga imiphumela emibi."
U-Lyudmila Borisovna, udokotela we-endocrinologist, eMoscow, eRussia.
“Abantu abaphethwe i-cholesterol ephezulu emzimbeni, ngeshwa, imvamisa kakhulu abayinaki le nkinga, bengayinaki ngokuphelele. Okwengeziwe, lesi sifo esinjalo kungaholela emiphumeleni engathandeki kakhulu, kuze kube ngomphumela obulalayo. I-Aterol kuphela engalapha ngokuphelele i-hypercholesterolemia. ”
U-Andrey, oneminyaka engama-39, eKaluga, eRussia.
“Ngenxa ye-cholesterol ephezulu, kuye kwavela izinkinga zamathumbu. Udokotela ubeke amanye amaphilisi, kepha mangaki angawaphuzanga - umphumela ucishe waba ngu-zero. Futhi manje, lapho ngangiphelelwa yithemba ngokuphelele, ngavele ngakhubeka ku-inthanethi ngokukhangisa umuthi i-Aterol. Nginqume uku-oda futhi angilahlekanga. Lo muthi ungisizile impela. Ngikuncoma wonke umuntu! ”
U-Irina, oneminyaka engama-33 ubudala, eKrasnodar, eRussia.
“Ngiyayemukela i-Aterol futhi anginele! Ekugcineni, ngakwazi ukuthola ithuluzi elisebenzayo lokwehlisa isisindo. Umphumela wokusetshenziswa kwayo uyamangalisa! Indoda nayo ijabule kakhulu. Manje sengikwazi ukuvela ngokungenamahloni olwandle ngokubhukuda, futhi empeleni ngizizwa ngilungile. Ngibonga kakhulu kuwo wonke umuntu odale lesi sidakamizwa. ”
Imibuzo, izimpendulo, izibuyekezo kusidakamizwa Miskleron
Imininingwane enikeziwe yenzelwe ochwepheshe bezokwelapha nabezokwelapha. Imininingwane enembile kunazo zonke mayelana nomuthi iqukethe emiyalweni efakwe emaphaketheni ngumakhi. Akunalwazi oluthunyelwe kuleli noma elinye ikhasi lesayithi lethu elingasebenza njengokungena esikhundleni sokukhalazwa komuntu siqu kochwepheshe.